फिफ्टी फिफ्टी अटोलोन नीति !
नेपालमा अझैंपनि अधिकांश मानिसहरु बैंक लोनकै सहायताले गाडी चढिरहेका छन् । गाडी मानिसको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्न थालिसकेको छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा हरेक मानिस बेफुर्सदिलो बनिसकेको छ । एभ्री सेकेन्ड काउन्ट हुन थालेको छ, एभ्री मुमेन्ट उत्तिकै अमूल्य बनिसकेको छ । यो समय बिजनेस माइन्डले त समयलाई ईश्वर ठान्न थालिसकेको अवस्था हो ।
सञ्चार र टेक्नोलोजीको अभूतपूर्व विकाशले मानिसको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन सँगैं उसको स्वतन्त्र र फुर्सदिलो जीवनमा पनि धावा बोलिदिएको अवस्थामा पला र घडीको पनि महत्व हुनु नौलो कुरा भएन । यस अवस्थामा जोकोही समयलाई सकभर व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न चाहन्छ नै । ऊ फुर्सद त चाहन्छ, तर समय बर्बाद गर्न चाहन्न । समयलाई डिक्रिजिङ गरेर बिजनेसलाई इनक्रिजिङ गर्ने, यो बखतमा हरेकको सामान्य विचार यही नै त हो । को उठाओस् स्टेसनमा सार्वजनिक यातायात कुर्ने झन्झट ? को बोकोस् यात्रु भर्दै जाने लंग रुटको भारी ? को सहोस् सार्वजनिक यातायात भित्रको बोतलभित्रको सिन्कीको जस्तो पेलाई ? हरेक व्यक्ति अब आफ्नो नीजि गाडी, नभए कम्तीमा मोटरसाइकलसम्म चढ्न चाहन्छ । ऊ वेस्टेज समयलाई फुर्सदमा बदलेर त्यो समय आफ्नो परिवार सँग बिताउँन चाहन्छ, नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न चाहन्छ, नयाँ पुस्तक अध्ययन गर्न चाहन्छ, मुभी हेर्न चाहन्छ, प्रेमिका–श्रीमतीसँग बाहिर डिनर जान चाहन्छ ।
पहिले कसैले गाडी किन्न चाहेमा २० प्रतिशत नगद चुक्तामा बाँकी बैंकले अटो लोन प्रदान गर्ने गर्दथ्यो । पछि अटोलोन सेक्टरको नीतिमा संस्करण हुँदै केही महिना अघि मात्र गाडी किन्दा अनिवार्य ३५ प्रतिशत नगद रकम चुक्ता गर्नुपर्ने र बाँकी लोन लिन सकिने नीति तर्जुमा भयो । ५० प्रतिशत अनिवार्य नगद चुक्ता गर्नुपर्ने नजीरमा गाडी व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेर उक्त नगद रकम ३५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । हालै मात्र पुनः ५० प्रतिशत मात्र अटोलोन प्रदान गर्ने नीति निर्माण भएको छ ।
टेक्नोलोजीको विकाश र विलासिनताका साधन बढ्नुले पनि विश्व समुदायमा यसले सकारात्मक प्रभाव नै पार्छ भन्ने मान्यता पनि एकातिर रहेको पाइन्छ । कोही विदेशी हाम्रा सडकमा घुमिरहँदा लेटेस्ट ब्रान्ड हाम्रा सडकमा हुँइकिएको देख्यो भने पनि नेपालप्रति विदेशीले हेर्ने नजर बदलिदै जान्छ । भनिन्छ विलासिनताका साधन र टेक्नोलोजी बढ्नु देश विकाशको पथमा अघि बढ्दै गरेको पूर्वसंकेत हो । विकशित देशहरुमा टेक्नोलाजी र अटोका साधनहरु सस्तो ब्याजदरमा सामान्य नगद किस्तामा उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा हाम्रो देश चाहिँ किन पछि हट्दैछ त ? सामान्य जागिर, ब्यबसाय गरिरहेको मान्छेले एकैपटक धेरै रकम चुक्ता गर्न सक्दैन र ऊ लोनमा गाडी लिन चाहन्छ, यसकारण पनि कि सवारी साधन उसको जागिर तथा व्यवसायको लागि अत्यावश्यक वस्तु बनिसकेको छ । तालु बेचेर विलासिताका लागि गाडी किन्नुको कुरा अलग भयो तर पसिना बेचेर लोनमा गाडी किनी चुक्ता गर्न चाहने व्यक्तिमा कस्तो असर पर्ला यो नयाँ नीतिले ? के अटो व्यवसाय नघट्ला त ? एकैपटक धेरै रकम चुक्ता गर्न नसक्ने हुँदा स्वतः ग्राहक त घट्ने भए नै, यो नयाँ नियमले अटो व्यवसायीहरु पनि रुष्ट छन् । गाडी गैदिएन र व्यापार घट्यो भने त उनिहरुको व्यवसायमा पनि ह्रास आउने नै भयो ।
‘‘२० प्रतिशत सम्म हुँदा राम्रै थियो, ३५ प्रतिशतमा पनि म्यानेज गरिएको हो’’ साङिग्रला मोटर्सका एसिस्टेन्ट म्यानेजर राकेश श्रेष्ठ अनौपचारिक कुराकानीको सिलसिलामा भन्नुहुन्छ ‘‘६ वटा बिक्न लागेका गाडी यसैले गर्दा हाल होल्डमा रहेका छन्, यो नीतिले त व्यापार डाउनमा नै जाने भयो नि’’ । त्यस्तै अन्य व्यवसायीको गुनाशो पनि यस्तै छ । ‘‘अटो लोन त जरुर घट्छ नै, तथापि यसलाई अन्य सेक्टरबाट कभर गर्न सकिन्छ’’ ब्यांक अफ माछापुच्छ«ेबाट नरेशजी चाहिँ अलिकति सकारात्मक नजरबाट पनि हेर्दै यसबाट सामान्यतया ग्राहकलाई पनि केही सहज हुने बताउँनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ ‘‘ हिजो ८० प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्नेमा ग्राहकले अब ५० प्रतिशतको मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, ३० प्रतिशत ब्याज त कम हुन्छ नि’’ । तथापि गाडी बिक्रीमा नै ह्रास आयो भने, यसले राज्यलाई पनि नराम्रो सँग धक्का लाग्न सक्छ । फिफ्टी–फिफ्टी नीतिले अटो बजारमा नराम्रो सँग असर नपार्ला भन्न सकिन्न । बैंकले अटोलोनमा नगएको लोन अन्य सेक्टरबाट कभर गर्न सक्छ तर अटो व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई भने यसले प्रत्यक्ष रुपले नै प्रभाव पर्ने हुँदा यो नीतिमा अटो व्यवसायी र सर्वसाधारणहरु रुष्ट देखिन्छन् । कतै अटो सेक्टरको ढाड सेक्ने त होइन फिफ्टी फिफ्टी अटोलोन नीति !